कता होला सेयर बजारको अबको यात्रा? « AayoMail
कता होला सेयर बजारको अबको यात्रा?
2021,2 October, 6:35 pm
काठमाडौं– डेढ वर्षदेखि बुलिश ट्रेण्डमा रहेको नेपाली सेयर बजार पछिल्लो एक महिना यता भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। सेयर बजारको यो यात्राले देश तथा विदेशमा रहेका साना तथा ठूला लगानीकर्ताहरु निकै तनाबमा छन्। विगत एक महिनाको अवधिमा लगानीकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबिसकेको छ। यससँगै समग्र बजारको पूँजीकरणमा समेत ठूलै संकुचन आएको छ।
डेढ वर्ष अघिदेखि ११ सय बिन्दुबाट निरन्तर बढिरहेको बजार ३१९८ बिन्दुसम्म पुगेर फर्केको छ। यस साताको अन्तिम कारोबारको दिनमात्रै नेप्से सूचक ३२.५१ अंकले घटेर २६३३.४२ बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेमा ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि लगातार घटिरहेकै छ। बिहीबारमात्रै सेन्सेटिभ इन्डेक्स ६.४१ अंकले घटेर ४९७.०५ बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै यतिबेलाको बजारमा कारोबार रकमका साथै सेयर खरिद कित्तामा समेत कमी आइरहेको छ। बिहीबार ७३ लाख २१ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। जबकि यसअघि नेप्से सूचक उच्च बिन्दुमा पुग्दा दैनिक ३ करोड कित्तासम्म पनि सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। यसरी नेप्से सूचक ३१९८ बिन्दुबाट २६३३.५१ बिन्दुमा आइपुग्दा १७.६५ प्रतिशतले घटिसकेको छ।
विश्वको कुनै पनि देशको पूँजीबजारलाई उक्त देशको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा हेरिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास कुन गतिमा अघि बढेको छ भन्ने कुरा उक्त देशको सेयर बजारको सूचकाङ्कले प्रस्टाउने गर्दछ। बजारबाट पूँजी परिचालन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक पहुँचलाई बलियो बनाउनसक्ने माध्यम भएकोले यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको हो। तर नेपालको पूँजीबजार भने अझै कमजोर देखिन्छ।
झन्डै २७ वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको नेपाली सेयर बजार अझै शिशु अवस्थामा नै छ। पछिल्लो समयमा प्राबिधिक रुपमा केही सहजता भए पनि बजारले आफ्नो गति र आकार भने अझै लिन सकेको छैन। धितोपत्र बजार शुरु भएको समयदेखि नै देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र हरेक पटक विभिन्न बहानामा हुने प्रहारले यसको भविष्य नै अन्योलमा रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज भन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्रै एक दशकले कान्छो हो। तर आज भारतको बजार इण्डेक्स धेरै माथि पुगिसकेको छ, त्यसको तुलनामा नेपालको बजार इण्डेक्स अझै पनि कमजोर अवस्थामा छ।
किन घट्दैछ बजार ?
२०७३ श्रावण १२ गते १८८१ बिन्दु चुमेर बियरिस टेन्डमा फर्केको थियो नेप्से। यस्तै, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनसँगै उकालो लाग्न थालेको नेप्से गत महिना मात्र ३२ सयभन्दा माथि पुगेर अलटाइम हाईको रेकर्ड बनाएको थियो। त्यसपछि भने करेक्सन सुरु भएको नेप्सेमा यो क्रम अझैपनि जारी नै छ।
अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि वस्तुको माग बढ्दा मूल्य बढ्छ र वस्तुको माग घट्दा मूल्य पनि घट्ने गर्दछ। तर, नेपालको सेयर बजार यो सिद्धान्तले मात्र चलेको देखिन्न।
संसारका धेरै विकसित देशले सेयर बजारलाई अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मान्छन् र यसलाई त्यति चलाउन चाहँदैनन्। तर नेपालमा भने कुनै न कुनै बहानामा सबैभन्दा बढी मार खाने क्षेत्र नै यही रहेको छ। यसलाई जति धेरै गिजोल्न सक्यो त्यति नै माथिल्लो निकायलाई फाइदा हुने हुनाले यसको टाउकोमा सधै प्रहार भइरहन्छ र भइरहेको पनि छ। अझ नेपालमा त पूँजी र मुद्रा बजारका नियामक निकायहरु नै बजारलाई धराशायी बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेका देखिन्छन्।
नेपालको पूँजीबजारमा हुने घटबढमा हरेक पटक केही नयाँ तत्वले काम गर्दै आएको छ। बजारमा हुने तरलता अभाव, सेयर कर्जाको विषय होस वा सेयर बजारको नियामक निकायहरुलाई अर्थमन्त्रीले गरिने फोनकल नै किन नहोस्। यी सबैले सेयर घटबढमा ठूलो प्रभाव पार्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय बजार बढेकै समयमा पूँजीबजारका नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सिईओ चन्द्रसिंह साउद सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन्। उक्त कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नु अगावै ढुंगानाले आफ्नो छोरीको नाममा सर्वोत्तमको सेयर खरिद गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। त्यस्तै साउदलाई पनि सोही कम्पनीको सेयर खरिद गरेको आरोप लागेको छ। जसका कारण उनले एक महिना अघि नै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई सरकारले पदबाट निलम्बन गरेपछि उक्त प्रकरणका लागि सरकारले छानविन समीति नै गठन गरि प्रक्रिया अघि बढायो।
यद्यपि ढुंगाना भने सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले पटक पटक ढुंगानासंग स्पष्टीकरण माग्दासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि सरकारले यतिबेला ढुंगानालाई आफ्नो सफाइका लागि अन्तिम मौका दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यसरी नियामक निकायका उच्च अधिकारीहरुमाथि आफ्नो पदीय मर्यादाको गलत प्रयोगगरि सेयर खरिद खरिद गरेको आरोप लागेपछि बजारमा संकास्पद गतिविधि भएको हुने रहेछ भनेर सामान्य लगानीकर्ता साइड लाग्न खोज्दा पनि नेप्से सूचकमा केही समय यता तिब्र गिरावट आएको छ।
अर्काे, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा पाइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट गरि १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गर्‍यो। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्था सेयर बजारका लागि प्रतिकूल रहेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन्।
केन्द्रीय बैंक तथा धितोपत्र बोर्ड पनि पछिल्लो समय बजारमा भएको वृद्धिमा केही करेक्सन आउनु जरुरी रहेको अनौपचारिक कुराकानीमा बताइरहेका थिए। यसरी नीति निर्माताहरुले नै बजार अहिले नै धेरै माथि जानु हुँदैन भनेर विषलेशण गरिरहेको अवस्थामा बजार बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरेको ठम्याई एकाथरि लगानीकर्ताको छ। यस्ता हर्कतले पनि बजारमा द्वन्द र अविश्वासको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ।
के अब बजार बढ्ला त?
नेपालको सेयर बजार निकै जोखिमयुक्त छ। यहाँको पूँजी बजारले हल्लाकै भरमा बुलिश र बियरिस टे«न्ड समातिरहेको हुन्छ। यस्तोमा लगानीकर्ता स्वयम नै सचेत हुनु आवश्यक छ। यद्यपि लगानीकर्ताको पूँजीको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भने राज्यको नै हो। तर बिडम्बना राज्यलाई खर्बौ कर तिरेर योगदान गर्ने यो क्षेत्रलाई उपहास गरिएको देखिन्छ।
बजार कहिल्यै पनि निरन्तर रुपमा बढिरहने हुँदैन। बेलाबखत केही समयका लागि घटबढ हुनु पूँजीबजारको प्राकृतिक स्वरुप नै हो। तर पछिल्लो समय भने नियोजित रुपमा नै बजार घटाइएको छ। यसरी घटाइएको बजारमा लगानीकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबिसक्दासमेत नियामक निकायले केही कदम चाल्न नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो।
बढिहाल्ने सम्भावना कम छः केशव कोइराला, लगानीकर्ता
निरन्तर बढिरहेको नेपाली पूँजीबजारमा यतिबेला निकै ठूलो करेक्शन आएको लगानीकर्ता केशव कोइराला बताउँछन्। निरन्तर घटिरहेको बजारमा लामो एवम ठूलै करेक्शन आएपश्चात मात्रै पुनः ३२ सय बिन्दु माथि उक्लिने उनको ठम्याई छ।
अहिले बजार घट्नुमा नीतिगत कारण र नियामक निकायहरुबाट आएको प्रतिक्रिया नै मुख्य कारण भएको उनको विश्लेषण छ। सेयर बजार बढ्नका लागि नीतिगत पक्ष, नीति निर्माता र बजार परिस्थितिअनूकल नभएको अहिलेको अवस्थामा बजारमा फेरि रौनक देखिएर तत्काल बढ्ने सम्भावना कम रहेको छ। तसर्थ तत्काल बजार धेरै नघटे पनि बढिहाल्ने सम्भावना पनि कम देखिएको कोइरालाको ठम्याई छ।
‘विश्व सेयर बजारको सुन्दर पक्ष भनेकै बजार घटेर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि बढ्नु हो। बढेर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पुनः घट्छ। यो विश्व बजारको बिशेषता नै हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘अझ यसलाइ यसरी बुझौँ, न्यूटनको चालसम्बन्धी तेश्रो सिद्धान्तअनुसार बललाई जमिनमा जति पछार्‍यो, त्यति नै माथि उफ्रिन्छ। अर्थात जति बजार घट्यो त्यति नै बढ्छ पनि। तसर्थ बजारमा आफूसँग भएका सेयर कित्ताहरुलाई यतिबेला सुरक्षित राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ।’
लगानीकर्ता सचेत रहनुपर्छः मुक्ति अर्याल, बजार विश्लेषक
घटिरहेको बजारमा सबै लगानीकर्तालाई सचेत रहन बजार विश्लेषक मुक्ति अर्यालले आग्रह गरेका छन्। ३१९८ को बिन्दुबाट बजार थप बढ्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहे पनि अब तत्काल बढ्ने सम्भावना कम देखिएको उनले औँल्याएका छन्।
‘पछिल्लो समय ११ सयको बिन्दुबाट बढ्न थालेको बजार ४ हजारभन्दा माथि पुगेको भए धेरै बढ्यो भन्न सकिन्थ्यो होला तर, ३२ सय बिन्दुमा नपुग्दै तल झर्न थालेको छ। बिहीबारसम्मको सूचकलाई हेर्दा पनि बजार १७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अब थप ५ प्रतिशतले बजार घटेमा भने वियरिस ट्रेण्ड सुरु भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।’
अर्यालका अनुसार, कोभिड महामारीको सन्त्रास कम हुँदै गएको, बजार, उद्योग व्यवसाय खुल्ला भइसकेको, शहरी क्षेत्रका धेरै नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेका जस्ता कारणले सेयर बजारबाट लगानी झिकेर आफ्नो व्यवसायी पेशामा लगानी गर्ने क्रम बढेका हुँदा बजार घटेको हो भने बजारमा अब धेरै उछाल आउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ। यद्यपि, अर्याल भने लगानीकर्ताले आजको प्रतिफलभन्दा पनि आगामी दिनमा कम्पनी कस्तो हुन सक्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा बजारको दिशा तय हुने बताउँछन्।